Maxaa Ka Cusub IOS 15.1 | IPhone news
Ignacio Sala | 26/10/2021 10:40 | macruufka 15
Sida Apple ku dhawaaqday usbuucii hore, cusbooneysiinta ugu weyn ee iOS 15, iOS 15.1, ayaa la sii daayay galabnimadii shalay (waqtiga Isbaanishka), cusbooneysiin la socota qaar ka mid ah sifooyinka la filayo in Apple aysan ku darin nooca ugu dambeeya ee noocaan iyo qaar ka mid ah kuwa gaaray iPhone 13-ka cusub.
Haddii aad rabto war oo dhan ogow kuwaas oo horeyba loogu heli jiray iOS 15.1 iyo iPadOS 15.1 ka dib markii la cusbooneysiiyay noocii ugu dambeeyay ee horeyba loo heli jiray, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhrinta.
3 Shaqada makro
4 IPhone 12 hagaajinta maareynta batteriga
5 HomePod waxay taageertaa Lossless Audio iyo Dolby Atmos
6 Barnaamijka Guriga
7 Qoraalka tooska ah ee iPadka
9 Kaarka tallaalka ee Wallet
10 Dayactirka cayayaanka
11 MacOS 15 Monterey hadda waa la heli karaa
SharePlay waa hawl loo qorsheeyay in lagu sameeyo u suurtageliso dadka in ay isu soo dhawaadaan Thanks to FaceTime, shaqo ka dhalatay baahida cudurka faafa ee coronavirus si aan ula xiriirno asxaabta iyo qoyskayaga.
Habkani waxa uu u ogolaanaya ka qaybgalayaasha in ay ka qaybgalayaasha ciyaar muusik, musalsalka iyo filimada si isku mid ah oo sidaas uga faalloodaan sidii iyagoo qol ku wada jira.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale way u oggolaaneysaa la wadaag shaashaddaada iPhone, iPad ama Mac qof kale, muuqaal ku habboon qorsheynta safarka, la kulanka asxaabta, caawinta qof dejinta ama cilad-saarka qalabkooda.
Markii la soo bandhigay iPhone 13 kala duwan, Apple waxay soo bandhigtay ikhtiyaar fiidiyow cusub oo loo yaqaan ProRes, a qaabka duubista muuqaalka loo isticmaalo duubista xirfadlayaasha ah ee bixiya daacadnimada midabka sare iyo hoos u dhigista fiidiyowga, si aad u faahfaahsan ayaa lumay.
Shaqadan Kaliya waxaa laga heli karaa iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro MaxIsticmaalayaasha kuwaas oo aan duubi karin oo kaliya, laakiin sidoo kale wax ka beddeli kara oo wadaagaya fiidiyowyada laga sameeyay qalabkooda. Shaqadan waxaa laga heli karaa kamarada - Qaababka - goobaha codsiga ProRes.
Haddii aad rabto Ku duub 4K at 30fps, waxaad u baahan tahay iPhone 13 Pro oo ah 256 GB ama ka sareeya, tan iyo qaabka kaydinta 128 GB, shaqadani waxay ku kooban tahay 1080 at 60fps. Tani waa sababta oo ah, marka loo eego Apple, hal daqiiqo oo fiidiyow ah 10-bit HDR ProRes waxay qaadataa 1.7 GB qaabka HD iyo 6 GB gudaha 4K.
Mid kale oo ka mid ah hawlaha cusub ee laga heli karo kamaradda iPhone-ka cusub ee leh iOS 15.1 waa macro. IOS 15.1, Apple waxay ku dartay beddelka dami auto macro.
Marka la damiyo, codsiga kamarada si toos ah ugu wareegi maayo xagal Ultra Wide gaabiska ah sawiro iyo muuqaalo Hawshan cusub waxa laga heli karaa Settings - Camera gudaheeda.
IPhone 12 hagaajinta maareynta batteriga
iOS 15.1 waxa ay soo bandhigtay algorithms cusub si loo ogaado xaalada dhabta ah ee batteriga, algorithms bixiya a qiyaasta ugu fiican ee awoodda batteriga waqti ka dib iPhone 12.
HomePod waxay taageertaa Lossless Audio iyo Dolby Atmos
Kaliya maahan IPhone wuxuu helay war muhiim ah iOS 15.1, maadaama HomePod uu sidoo kale cusboonaysiiyay barnaamijkiisa 15.1, ku darista maqal aan khasaare lahayn iyo taageerada Dolby Atmos oo leh maqal meel bannaan ah.
Si aan u suurtagelino shaqadan cusub, waa in aan ku samaynaa codsiga Guriga.
Lagu daray kiciya otomaatiga cusub iyadoo lagu saleynayo akhrinta HomeKit-ku-talagalka, tayada hawada ama dareenka heerka qoyaanka.
Qoraalka tooska ah ee iPadka
Shaqada qoraalka aqoonsiga, Qoraal toos ah, oo laga heli karo kamarada iPhone-ka, ayaa sidoo kale hadda laga heli karaa iPadOS 15, muuqaal kuu oggolaanaya inaad aqoonsato qoraallada, lambarrada taleefanka, cinwaannada ...
Tilmaamahan waxa laga heli karaa iPad-yada leh A12 Bionic processor ama ka sareeya.
Lagu daray tallaabooyin cusub oo hore loo qorsheeyay taas oo noo ogolaanaysa in aan kor u qaadno qoraalka sawirada ama faylasha qaabka GIF.
Kaarka tallaalka ee Wallet
Isticmaalayaasha qaatay tallaalka COVID-19 waxay isticmaali karaan app-ka Wallet kaydi oo samee kaadhka tallaalka taas oo lagu soo bandhigi karo meel kasta oo looga baahan yahay iyada oo aan la qaadin shahaado jireed oo warqad ah.
Shaqadan xilligan waxa kaliya oo laga heli karaa qaar ka mid ah gobolada Maraykanka.
La dejiyay dhibaatada uu codsiga Sawiradu soo bandhigay marka si khaldan u soo bandhig in kaydku buuxsamay marka la soo dejinayo muuqaalada iyo sawirada.
Dhibaatada dhacday markii la daacinayay codka arjiga awooda hakad markii la xirayo shaashadda.
Iyadoo iOS 15.1 ay sidoo kale xallisay dhibaatada ma ogola in qalabku ogaado shabakadaha Wi-Fi ee jira.
MacOS 15 Monterey hadda waa la heli karaa
Iyadoo la sii daayo iOS 15.1, Apple ayaa sii daayay nooca ugu dambeeya ee macOS Monterey, Nooc cusub oo soo bandhigaya qaar ka mid ah sifooyinka sidoo kale laga heli karo iOS sida SharePlay.
Hadda, shaqada Xakamaynta Universal, oo ah shaqo kuu ogolaanaysa inaad ka dheerayso kormeeraha Mac ilaa iPad, lama heli karo laakiin wuxuu iman doonaa toddobaadyada soo socda, sida uu sheegay Apple maalmo ka hor.
macOS Monterey waa soo dhaweynayaa Jidadka gaaban, qaabka la taaban karo iyo Safari cusboonaysiinta ee iOS 15. Noocan cusubi wuxuu la jaan qaadayaa isla kombiyuutarada macOS Big Sur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Maxaa ku cusub macruufka 15.1
Apple Fitness + iyo Apple One Premiere ayaa diyaar ah laga bilaabo usbuuca soo socda